आज सबै भन्दा छोटो दिन र लामो रात - Sindhuli Saugat
आज सबै भन्दा छोटो दिन र लामो रात
सिन्धुली साैगात संवाददाता २०७५ पुस ६ गते शुक्रवार काठमाडौं
आज पुस ६ गते बुधबारको रात यो वर्षकै सबै भन्दा लामो रात हुनेछ । जो लगभग १४ घण्टा ४४ मिनेट र ५४ सेकेन्ड लामो हुनेछ । आजको दिन यो वर्षकै सबै भन्दा छोटो भए पनि भोलि देखि दिनहरू क्रमशः बडदै जानेछन् । रात धेरै लामो हुने भएकाले यसलाई विभिन्न ठाउँहरूमा विभिन्न पर्वका रूपमा मनाउने प्रचलन छ।
सुदूरपश्चिममा भने यो पर्व पुस १५ गते मनाइन्छ र जसमा राति एक पटक सुतेर अनि उठेर फेरी मिठो खानेकुराहरू खाने गरिन्छ । बस्तुभावलाई समेत राति एक पटक फेरि घाँस हाल्ने चलन छ। आज २१ जुन अर्थात् वर्षकै लामो दिन ।
नेपालमा सूर्योदय र सूर्यास्तकोबीचको समय अनुसार आजको दिन झन्डै १३ घण्टा ५४ मिनेटको हुनेछ । आजको दिन पृथ्वीमा दक्षिणी गोलाद्र्धमा दिन छोटो र उत्तरी गोलाद्र्धमा दिन लामो हुने गर्छ । नेपाल उत्तरी गोलाद्र्धमा पर्छ ।
ज्योतिषी डा. सुनिल सिटौलाका अनुसार ज्योतिष शास्त्रको ग्रह गति अनुसार आज दिन लामो हुन्छ । भोलिदेखि दिन छोटो र रात लामो हुँदै जान्छ ।
सूर्यलाई परिक्रमा गर्ने क्रममा आफ्नो अक्षमा पृथ्वीको ढल्काईकन आधारमा सूर्यको प्रकाश धेरै समय पर्ने भएकाले सामान्यतया २१ जुनमा दिन लामो हुन्छ ।अन्तर्राष्ट्रिय समय अनुसार लामो दिन जुन २०, २१ वा २२ तारिख मध्य कुनै एक दिन पर्छ । चैतको ७ गते र असोजको ७ गते चाहिँ दिन र रात बराबर हुने गर्छ । त्यस दिनलाई क्रमशः वसन्त समाप्त र शरद सम्पादन भन्ने गरिन्छ ।
पुस ७ गते अर्थात् डिसेम्बर २१ तारिखमा भने सूर्यको प्रकाश पृथ्वीमा कम पर्ने भएकाले दिन सबैभन्दा छोटो र रात लामो हुने पनि डा. सिटौलाले बताउनुभयो । बैदिक ज्योतिषको काल गणनामा आजदेखि सूर्य दक्षिण लाग्ने र दक्षिणायन सुरु हुने भएता पनि व्यवहारमा आउँदो साउन १ गतेबाट सूर्य दक्षिणतिर लाग्ने मानिएको छ ।
पछिल्लाे - प्याव्सन रनिङशिल्ड प्रतियोगिता समापन
अघिल्लाे - नगर स्तरिय किशोरी भलिबल प्रतियोगिता